CAD for Myanmar: October 2011
Posted by Wise Guy at 12:40 AM0comments Links to this post
Posted by WISE GUY at 2:25 AM0comments Links to this post
AutoCAD 2012 64 Bit Version ကို တမျှော်မျှော် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ နောက်တရက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် နည်းနည်း အပျင်းကြီးပြီး ပိုင်းလိုက်တာ Filesize ကြီးသွားလို့ ရွာကလူတွေ Download ချမရရင် ပြောပါဗျာ။ ကျနော် ခပ်သေးသေး ပြန်ပိုင်းပေးပါ့မယ်။ IE နဲ့ Download ချဖို့ အားမပေးပါဘူး။ Downloader တခုခုနဲ့ ချဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ် . . . ။
“အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ” ခင်ဗျား . . .။
Posted by WISE GUY at 11:16 PM0comments Links to this post
AutoCAD 2012 ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ရက်နေ့မှာ ဈေးကွက်တင်ရောင်းပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ရှေ့က Version ကိုတောင် သေသေချာချာ အစာမကြေသေးခင်မှာ အသစ်ထပ်ထွက်လာပြန်တာပေါ့။ ပေါ်သမျှအသစ်၊ နောက်ဆုံး Version လေးမှ မြည်းစမ်းကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် 32 Bit Version ကို အရင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ 64 Bit Version လည်းတင်ပေးပါ့မယ်ဆိုတာ ပြောရင်းနဲ့ . . .
Posted by WISE GUY at 2:23 AM0comments Links to this post